Shiinaha Taper Roller Dhalista Metric taxane soosaarayaasha iyo alaableyda. LGGB
Qaadista duubista shaashadda guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero culeyska isku dhafan inta badan ka kooban culeyska shucaaca. Koobabkoodu waa kala sooci karaan isu-imaatinka fudud. Inta lagu guda jiro sii kordhaya iyo isticmaalka, nadiifinta radial iyo axial nadiifinta la hagaajin karo iyo preloaded sii kordhaya ayaa la samayn karaa.
Qaadista duubista taper-ka ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu maareeyo culeyska iyo culeyska shucaaca ee fallaadhaha wareegaya iyo guryaha.
Dhajinta rullaluistemadka loogu talagalay waxaa loogu talagalay inay qaadaan labada riix iyo culeyska shucaaca waxayna ka kooban yihiin afar qaybood: koorta, ama giraanta gudaha; koobka, ama giraanta dibedda; rollers-ka la duubay, ama walxaha rogrogmada; iyo qafiska, ama xajiyaha wax lagu duubo.
Taper rullaluistemadka dhalista sida caadiga ah waxay qaadataa radial, xamuul isku jira oo isku jira oo xamuulkiisu u weyn yahay. Awoodda xamuulka xamuulka qaada wuxuu kuxiranyahay xagasha xiriirka ee wadada giraanta dibadda. Markay sii weynaato xagasha xiriirku, way sii weynaanaysaa awoodda.
Rullaluistemadka taper-ka oo qaata xagasha u dhexeeya istiraatiijiga banaanka ee loo yaqaan 'generarix and line, the bear' waxay xambaari kartaa culeys culus iyo kuwa kale oo duuban oo la taaban karo, inta badan waxay xambaartaa culeyska wadajirka ah ee ku saleysan hal dariiq oo xamuul ah, laakiin ma ahan oo keliya culeyska shucaaca.
Wareegyada gawaarida gawaarida ayaa leh qulqulaya istiraatiijiyadda gudaha iyo dibedda, Rullaluisteha duubku wuxuu ku yaal bartamaha labada tartan. Noocyada noocan oo kale ah badanaa waa la kala saari karaa, kuwaas oo ah hayaha, giraanta gudaha iyo giraanta dibedda ayaa lagu dhejin karaa gooni. Waxay u adkeysan karaan culeyska jihada shucaaca weyn iyo culeyska foosha ee gaarka ah. Waxaa loogu talagalay cabirro iyo qaabab kala duwan si ay ula kulmaan dhammaan noocyada shaqooyinka.
d D T B C miiska r1min Cr Kor r / daqiiqo r / daqiiqo
Hore: Taxane Roller Dhalista Inch taxane
Xiga: Kubad jeexjeexan oo qoto dheer leh 16000 taxane ah